Manonona ny fahotana amin’ny tena anarany
"Dia hoy Josoa tamin'iAkana: Anaka, masina hianao, omeo voninahitra Jehôvah Andriamanitry ny Isiraely, ka mitsora aminy; ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao; aza afeninao ahy izany." - Jos. 7:19.
Ny tantaran' i Akana, dia mampianatra lesona lehibe izay maneho fa noho ny otan'ny olona iray, dia mitoetra eo amin'ny vahoaka na ny firenena iray manontolo ny fahatezeran'Andriamanitra mandrapahita ilay mpandika lalàna ka hamaizana azy. Ny ota amin'ny maha-ota azy dia mpanimba. Mety hamindra ny aretiny amin'ny olona amin'arivony maro ny olona iray voan'ny habokana mahafaty. Maro no tsy sahy manameloka ny fandikan-dalàna andrao hanohintohina ny toeram-pahefany na ny lazany izany. Ny hafa indray mihevitra fa faharatsiam-panahy ny manameloka ny ota. Ny mpanompon'Andriamanitra dia manana adidy lehibe haneho ny Tenin'Andriamanitra tsy amin-tahotra na filana sitraka. Mila manonona ny ota tamin'ny tena anarany isika.
Tsy hitarika velively amin'ny fanamaivamaivanana ny fahotana ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy afaka hanarontsarona na hanala tsiny ny fahadisoana tsy nibebahana izany. Diso aoriana loatra i Akana vao nahafantatra fa tsy miova tahaka ilay Mpanao azy ihany ny lalàn'Andriamanitra. Voakasika avokoa na ny fihetsitsika na ny eritreritsika na ny fihetseham-pontsika. Manaraka antsika izy io [ny ota] ary tonga hatrany amin'ny fihetsika madinika indrindra izay tsy misy mpahalala. Raha manaram-po amin'ny ota ny olona, dia voatarika hihevitra ny lalàn'Andriamanitra ho tsy dia manan-danja loatra. Maro no manafina ny fandikan-dalàny amin'ny mpiara-belona aminy ka mihevitra fa tsy ho hentitra loatra Andriamanitra ka hanamarika ny fahotany. Ny lalàn'Andriamanitra anefa no faneva lehiben'ny fahamarinana, ka amin'ny alalany no hampitahana ny zava-drehetra natao teo amin'ny fiainana, amin'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny asa rehetra natao sy ny zava-miafina rehetra, na ny soa na ny ratsy. Ny fahadiovan'ny fo no mitondra ho amin'ny fahadiovan'ny fiainana. Zava-poana avokoa izay mety ho fialan-tsiny rehetra mahakasika ny ota. Iza no hisolo vava ny mpanota raha Andriamanitra no miampanga azy? SDABC 2:996,997.
Ny olona tena ilain'izao tontolo izao dia olona izay tsy azo vidina na amidy, olona izay marina sy mahitsy hatrany amin'ny ati-fanahiny lalina, ka tsy matahotra hanonona ny fahotana amin'ny anarany, lehilahy sy vehivavy izay mahatoky amin'ny adidiny tahaka ny fanondro avaratra ka vonona hijoro amin'ny marina hatramin'ny farany na dia hikoro aza izao tontolo izao. - Ed, t. 57.